Nambara fa raitra ny fandaminana kanefa fahafatesana no valiny, fotoana fohy avy eo. Fetim-pirenena kanefa dia mivadika ho fatim-pirenena ny zava-nisy, hoy i Pasitera Edouard Tsarahame. Nisy fandaminana tokony ho nazava satria misy tanàna mifehy azy ity Antananarivo ity, dia ny kaominina, prefe, faritra Analamanga. Tsy hita taratra anefa ireo. Tsy nomena andraikitra ve ireo fa noraisin’ny fiadidian’ny filoha avokoa ? Iza no tena tompon’antoka ? Mila sokafana ny fanadihadiana ka hakarina fitsarana satria maro ny Malagasy maty. Mila hakarina fitsarana ireo mpikarakara rehetra ny fetin’ny 26 jona. Mangataka amin’ny filoha ihany koa hampisy fisaonam-pirenena fa be loatra ny aina nafoy. Raha misy ny fitiavan-tanindrazana sy fitiavana ny Malagasy dia atao ny fisaonam-pirenena. Miantso fifanomezan-tanana ho an’ireo maratra. “Raha ny tena izy dia ny ben’ny tanàna no nitsena ireo filoha roa kanefa tsy mitovy hevitra aminao ve dia tsy nohajainao ? “, hoy i Tabera Randriamanantsoa. Tsy nomena andraikitra sy tsy nomena haja ny kaominina ary tsy nohajaina ny rafitra. Nisaotra ny fanjakana izy ireo noho ny fanolorana fiaramanidina, angidimby… Nametra-panontaniana kosa izy ireo hoe avy aiza ny vola ? Tsy hita ao anaty tetibolam-panjakana mantsy ireny, hoy izy ireo. Fanampiana avy aiza dia inona no tambiny ?